October 20, 2020 Xuseen 1
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay Golaha Wasiirada magacaaban ee xukuumadda ee uu soo dhisay Ra’iisul wasaaradda xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble.
Kulanka oo ah midkii ugu horreeyay uu Madaxweyne Farmaajo la qaato golaha wasiirada xalay lagu dhawaaqay ayaa waxaa uu ahaa mid salaan iyo Is-barasho ah, madaxweynaha ayaana ra’iisul wasaaraha ku bogaadiyay soo dhisidda Xukuumad tayo leh, doorka muuqda ee uu ka siiyey dhallinyarada, haweenka iyo sida uu xoogga u saarayo sii amba-qaadidda guulihii h
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka codsaday Guddoonka iyo Xildhibaannada Golaha Shacabka ansixinta Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Rooble, si loo dardar geliyo howlaha muhiimka ah ee horyaalla Golaha Xukuumadda, loona gaarsiiyo dalka doorasho hufan oo wakhtigeeda ku qabsoonta.
WANKA MACASHA II QABO ANIGUNA AAN GAWRACO! TUUGO
DAAWO-Sheekh Mustafe Xaaji Ismaaciil oo Garoowe gaarey iyo qaabka loo soo dhoweeyey.
Dagaal khasaare geystey oo ka dhacay magaalada Dhahar iyo ciidanka Puntland oo gaadiid qabtay.
Madaxweynaha Somalia oo qaabilay wasiirka difaaca ee Ingiriiska & qodobada laga hadlay.
Kenya oo soo dhoweysey go’aankii IGAD ee ka caraysiiyey dowladda Soomaaliya.
XOG: Maxaa ka soo baxay kulamadii beesha caalamka iyo madaxweynaha Hirshabeelle
Lafta-gareen oo maanta gaarey magaalada Baydhabo si kululna uga hadlay dagaalkii ka dhacay gobolka..
VIDEO: Wasiir Dubbe,”Jabuuti waxa ay la safatay Kenya, warka guddiga xaqiiqo raadintuna waa mid hal dhinac ah”.